TSY MAINTSY AVERINA NY SAFIDIN’NY VAHOAKA NANGALARIN’NY MPANONGAM-PANJAKANA – MyDago.com aime Madagascar
Nanana ny safidiny ny vahoaka Malagasy hoy ny Ct Horace androany teny amin’ny Magro Behoririka, izay nangalarin’ny mpandroba fahefana. Tsy manaiky isika hoy izy raha tsy averina ny safidintsika. Nisy hoy izy ny fanangonantsonia nataon’ireo vehivavy parlemantera teny Tsimbazaza, izay milaza fa ny fifidianana solombavambahoaka no atao mialoha ary nentina tany amin’ny Sadc izany. Izahay vehivavy parlemantera Ankolafy Ravalomanana hoy Horace dia tsy nanao sonia izany. Tsy misy lanjany izany raha tsy ao isika. Ny Cst Rodin kosa dia nilaza fa nilaza Ratsirahonana fa hisy dinika amin’ny Alatsinainy eny Ivato. Fa maninona no atao an’izany ity raharaha ity ka hoe izany Ravalomanana izany tsy miendrika hofidiana. Tsy ny Filoha Ravalomanana hoy Rodin no nanongam-panjakana, tsy nandroba. Aza adino hoy izy fa ny FFM dia nanao io lalàmpanorenena tamin’ny FAT tamin’ny 2010 io.Ny CSC dia ireo izay ianteherana amin’ny fampiharana ny tondrozotra. Ny radio aza hoy Rodin Rakotomanjato tsy vitany ny nanokatra azy hatramin’izao kanefa hoe manaraka ny tondrozotra. Ny be baoty dia tsy adinonay ny nifampiresahanareo tamin’ny be kintana avy any ivelany. Aza atao sinema ny raharaha hoy izy fa ialahy mianakavy no miady ny tsy hiverenan’ny Filoha Ravalomanana Marc hatramin’izao. Ho henjana ny lalao manomboka amin’ny Alatsinainy izao hoy Rodin fa aleo asehon’ny vahoaka fa matanjaka ny zanak’i Dada. Fay ny olona, potika ny fananany ka ireo olona hivory amin’ny Alatsinainy ireo no namotika izany. Manoela dia nanome hafatra ho an’ireo izay hivorivory. Izahay hoy izy tsy mila ireo fa rehefa tadiavina ny rombo dia alefaso. ny ataonareo ihany no averina aminareo. Tsy misy daty mihemotra izany eto noho izany tsy mitondra Rajoelina. Nambarany ihany koa fa ilaina ny biletà tokana 1,20m fa tsy ny A3. Aza fitahina ny vahoaka Malagasy hoy izy fa izahay tsy hanaiky izany.
ME RASAMIMAKA MAHEFALAHY : TSY MAINTSY AVERINA AMIN’NY TOMPONY ARA-DALANA NY TANY REHEFA TONGA NY FOTOANA
Auteur Solo Razafy*Publié le 1 juin 2013 Catégories Politique
4 pensées sur “TSY MAINTSY AVERINA NY SAFIDIN’NY VAHOAKA NANGALARIN’NY MPANONGAM-PANJAKANA”
2 juin 2013 à 3 h 43 min
Lea RavLELO (lobbying tsisy faran @ i Fatima)
sy ny forongom-behivavy be maquillage sophistiquée artificielle AO
« vehivavy parlemantera teny Tsimbazaza, izay milaza fa ny fifidianana solombavambahoaka »: maivana toa ny volom-borona toute-chair pas-chère MPIREVY mpameno garde-robe lèche-vitrine any Parisy de migoka miloka miaraka amin-dry zalahy jiolahim-boto isany
2 juin 2013 à 6 h 23 min
Efa miresaka, mandalo ato an-tsaiko ny resak’ilay mpitondra taxi nitondra ahy indray mande, teo @ vanim-potoana nanomboka nanorona itony Fikambanan’ny Fampihavanana Malagasy FFM izay Sylvain RaBoto ny prézidà
Notantarahin’ilay mpamily chauffeur ny nolazain’ilay vehivavy nentiny ny omalin’io: – convoquée pour recrutement comme membre au sein du ffm de Sylvain Raboto
– tsy rotitra ilay ramatoa mamaly ny fanontaniana (hono):
« izaho anie hoy ilay izy tsy mahita rirany @ izany, tsy bagage background am-paosiko, zéro fahaizana eo @ ilay sehatra, omeo clue oe atao ahoana?
valin-teny azon’ilay ramatoa (hono):
« Tsy mila izany, araho fotsiny ny fitsipika sy lalana atoro anao, … »
Ilay olona anefa efa TSY manana assurance hoe afaka hisahana ilay andraikitra
Araky ny tononkiran’ny vazon’i Dadah groupe Mahaleo, manao hoe:
[Tao an-tsekoly izaho no gisitra,
(tamin’ny andron’ny Amiral rouge ireny)
népotisme hoy ny mahay miakatry ny ABDia
2 juin 2013 à 6 h 37 min
vao omaly ny cnoe nilaza oe: ny recensement – tokony ho voatàna araty ordi az, tsy tomombana @ izay laoniny akory
Any ambanivohitra az, araky ny édition nivoaka teto,
toa misy mampianatra hoe:
(sa sangisangy – fa antanam-pFOZA moa ny firenena): asio X izay tsia TSY safidinareo?!
« biletà tokana 1,20m fa tsy ny A3 »
* 1,20m (heritrereto kely anie ny halavan’izany ê: omg an)
* ny A3 moa dia izany dia samy maharaka fa novolavolain’i Béa(titude) hahazo première ligne i Andry Rajoelina
3 juin 2013 à 20 h 25 min
Précédent Article précédent : RAVELOSON CONSTANT : Efa tonga eo amin’ny tetezamita tsy misy an-dRajoelina isika
Suivant Article suivant : Voaroban’ny vahoaka i Lahiniriko Jean